Kuzvishandira-wega uye Injini dzekutsvaga | Martech Zone
Kuzvishandira-wega uye Injini dzekutsvaga
Muvhuro, Mbudzi 12, 2012 Mugovera, Mbudzi 10, 2012 Douglas Karr
Imwe nzira yekuvandudza kuchengetedzwa kwevatengi uye kugutsikana kwevatengi kugutsa zvirimo zvinobatsira vatengi kuzvibatsira. Kwete chete kuti pane kuvandudzwa kwekugutsikana kwevatengi, pane yakananga mutengo-chengetedzo inosanganisirwa nevatengi vasingasunge yako vatengi vatengi mitsara. Kuburitsa yako base base, mibvunzo inowanzo bvunzwa, snippets uye mienzaniso uko injini dzekutsvaga dzinogona kuzviwana dzinoita izvi zviitike - kwete kuzviisa kumashure kwekupinda nekutya kwevanokwikwidza kuzviwana.
Zvidzidzo zvenguva pfupi zvinotiudza kuti vatengi vazhinji vanofarira kuzvishandira pane kubata mushandi wekutsigira. uye sezviri kuratidzwa pazasi infographic, makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe muzana vanotaura kuti vanoshandisa base ruzivo kana rikazadzisa zvavanoda. Idzi inhau huru kumabhizinesi; kuzvishandira-nzira ndiyo inokurumidza uye inodhura-nzira yekutsigira vatengi. Zendesk's Infographic Improvements mu Tsvaga Mamwe Akangwara Kuzvishandira
Tags: kugutsikana kwevatengiMabatiro evatengiFAQskuzvishandira
Maitiro Atinoshandisa Zvemukati Kubva Kumakambani
Nov 12, 2012 na3:23 PM
Izvi zvinhu zvinonakidza! Zvimwe zvinokurumidza kuita kubva kumurume anoita manejimendi eruzivo uye kuzvishandira kuti ararame:
1. Zvinoshamisa kuti Oracle yakataurwa muchikamu cheSEO uye kugovera zvirimo zvako kuburikidza neinjini dzekutsvaga pawebhu, sezvo iri muenzaniso unocherechedzwa wekambani yeB2B isingagovani zvinhu zvekutanga zveruzivo kuburikidza neGoogle et al. Zvenani kana zvakanyanya, vanokiya yavo KB zvemukati kuseri kwekupinda kwavo
2. Data yangu yakanyanya, yakasiyana-siyana - yakaderera zvikuru - pane "40% ichadana nzvimbo yekubatana mushure mekuzvishandira." Kana iwe ukafunga nezve yako wega B2C chiitiko paAmazon, Microsoft, nezvimwewo, unogona kuona kuti aya maodha ehukuru akanyanya kukwirira. Asi kunyangwe munzvimbo dzeB2B, vhoriyamu pawebhusaiti ndeye 10x - 30x vhoriyamu munzvimbo yekutsigira, kana kupfuura.
3. Ndinofunga kuti Gartner haana kururama pamusoro pevamiririri vechokwadi. (70% mukana) 🙂
Nov 12, 2012 na4:17 PM
Mushure mePenguin & Panda inogadziridza zvirimo ndimambo. Kutsikisa hwaro hweruzivo rwako kunosimbisa SEO yako